32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် စက်ရုံ - MELONTEL
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာ အမြင် > ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော > 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အမြန်အသေးစိတ် မူရင်းအရပ် - Zhejiang, China (Mainland)တံဆိပ်အမည်: Yuhuiမော်ဒယ်နံပါတ်: YH-1066-32ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ၃၂ FTTH Termianl အကွက်အမျိုးအစား: အပြင်မှာ & မိုးလုံလေလုံပစ္စည်း: SMCအရွယ်အစား: 420x350x160mmစွမ်းရည် -4pcs 1x8 PLCအရောင်: Greyoperating အပူချိန်: -40âမှ + 80&......
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ၃၂ FTTH Termianl အကွက်
စွမ်းရည် -4pcs 1x8 PLC
အလေးချိန် - ၃.၆ ကီလိုဂရမ်၊
32 သော့ခတ် IP65 ရေစိုခံခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူအဓိကအပြင်ဘက် Fiber Optic Terminal box
1. အသုံးပြုသော ABS ပစ္စည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားသန်စွမ်းမှုနှင့်အလင်းကိုသေချာစေသည်။ 2. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်: IP65 ။
၅ ။ အရွယ်အစား - ၄၂၀ မီလီမီတာမှ ၃၅၀ မီလီမီတာ x ၁၆၀ မီလီမီတာ (W x H x D)
၆။ စွမ်းဆောင်ရည် -4pcs 1x8 PLC splitter
အသုံးပြုထားသည့် SMC ပစ္စည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားသန်စွမ်းစေပြီးအလင်းကိုသေချာစေသည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့် - IP65 ။
အရွယ်အစား: ၄၂၀ မီလီမီတာမှ ၃၅၀ မီလီမီတာ x ၁၆၀mm (W x H x D)
အလေးချိန် - ၃.၆ ကီလိုဂရမ်
၁၆ ဂိုး (၈ ဂိုး၊ ၁၂ ဂိုး၊ ၁၆ ဂိုး၊ ၂၄ ဂိုး၊ ၄၈ ဂိုး)
hot Tags:: 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော, တရုတ် 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော, 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော စက်ရုံ, 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ, 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော ပေးသွင်းသူများ, 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော စျေးနှုန်း, ဝယ်ပါ 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော, စိတ်ကြိုက် 32 အဓိက အပြင်ဘက် PLC သတျတော
32 Core ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော